Warshadda Dhismaha Shiinaha CupLock iyo alaab-qeybiyeyaasha. Zhongming
Luowen CupLock Scaffolding waa nooc cusub oo iskuulada ah, waa la baaray, lana qaabeeyay lana soo saaray tixraaca tignoolajiyadda ajaanibta ah ee horumarsan ee wadajirka iyo kaabayaasha, ku wanaagsan tayada iyo adeegsiga.
Qaab dhismeedka 1.Simple: Qaybaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah istaandarka, buugaagta iyo dhejiska, way fududahay in la isu geeyo oo la kala furfuro, sidoo kale way fududahay keydinta, wareejinta iyo dayactirka.
2.Badbaado iyo Joogto: Koobka kor u kaca wuxuu leeyahay kala-bax iyo is-culeys, wuxuu isku xiri karaa si joogto ah, tani waxay ka dhigeysaa joornaalka mid joogto ah, rarka buugga wuxuu u wareejin karaa jaangooyada koobka hoose, xitaa koobka kor waa dabacsan yahay, wadajirka buugga ayaa ku xidhi kara istaandarka caadiga ah.
3.Multi iyadoo la adeegsanayo: Marka loo eego dhismaha gaarka ah, Iskuxidhka Koobka ee Lock waxaa lagu soo ururin karaa hal ama laba saf oo leh cabbir kala duwan, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa qalab dhismeed fara badan, sida qaab dhismeedka taageeraya, tiirarka taageeraya, jir qaadista qalabka, marxaladda taageerida , iwm
4.Haalinta Sare: Jaangooyuhu wuxuu u shaqeeyaa sixixi ah, tani waxay ka dhigaysaa isku dhejiska booska saddex-geesoodka ah, xoog sare iyo joogtaynta qaab-dhismeedka. Saxanka iskutallaabtu wuxuu ku fiican yahay xiirashada axial adkaysi u leh, wuxuuna ka dhigaa dhidibka dhuumaha kasta hal saxan, sidaa darteed waxay hagaajineysaa 15% xoog iyo waxqabad joogto ah.
5.Waxaa dib loo isticmaalay: iskudhafyada Luowen waxaa sameeya bir bir ah oo heer sare ah, ma fududa in waxyeello loo geysto ama qaab ahaan, marka waa loo isticmaali karaa si isdaba joog ah.
Kwikstage Qalabka Isboortiga, Iskeelka Iskeelka Isku-dhejiska ah ee Jack, Iskuxidhka Birta Cuplock, Qaybta 'Ringlock Scaffolding Bracket', Qaybo ka mid ah Isgoysyada Ringlock, Culus Waajibaadka Isku-dhafka Ringlock,